घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे - Muldhar Post
घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे
पत्रपत्रिकाबाट २०७६, ३ आश्विन शुक्रबार 592 पटक हेरिएको
आर्जन पाण्डेले गाएको ‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे’ बोलको गीतले निकै चर्चा पाएको छ । गीत निकै राम्रो भएर भन्दापनि गीतमा प्रयोग भएका शब्दका कारण चर्चित बनेको हो । एक हप्ताअघि युट्युबमा अपलोड भएको यो गीत अहिले ट्रेन्डिङमा छ । तर गीतमा प्रयोग भएका शब्दले महिलाको अपमान भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।
यो खबर हामीले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ‘घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे’ यसको मतलव कुनै युवती राम्री हुन घाँटीभन्दा तलका अंग राम्रो हुनुपर्छ । अनुहार र सम्पूर्ण शरीर नै नहेरी कुनै पुरुषले महिलालाई राम्रोको दर्जा भिराइदिन्छ भन्ने आसयका कमेन्ट पोस्ट भएका छन् ।
पतिसँग पार्टीमा आएकी कुनै विवाहित महिलालाई एउटा युवकले लास्टै मन पराएको र पट्याइदिने रहर भएको बताउँछ । आर्जन पाण्डेको स्वरमा रहेको यो गीतमा आर्जन पाण्डे, रीमा विश्वकर्मा र पवन गिरीको अभिनय छ । प्रतीक पौडेलको संगीत, कोविद वज्राचार्यको एरेन्ज, दी झोले प्रोडक्सनको कन्सेप्टमा यो गीतको भिडियो तयार भएको हो । भिडियो निर्देशन अस्ट्रो झोलेले गरेका छन् ।
चर्चामा आउन गीतमा जे मन लायो त्यही शब्द प्रयोग गरिएको आरोप लागेको छ भने भिडियोमा अभिनय गर्ने रीमालाई पनि पैसाका लागि जे पनि गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको छ । उनीमाथि आफू महिला भएर समग्र महिलाको अपमान हुने गरी बनाइएको गीतमा बिनासंकोच अभिनय गरेको कमेन्ट छ । रीमाले भने यसबारे आफू अहिले केही नबोल्ने जवाफ दिइन् । अभिनय गर्नु आफ्नो काम भएको बताउँदै उनले बोल्नुपर्छ भन्ने लागेको दिन सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिने बताइन् । गीतको युट्युब लिंकमा आएका ६ सय ३३ कमेन्टमा अधिकांशले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै ट्विटर र फेसबुकमा समेत गीतका शब्दले अश्लीलता फैलाएको भन्दै विरोध गरिएको छ।
गीतकार कृष्णहरि बरालले साहित्यमा जे पनि लेख्न पाइने बताउँदै कला संगीतमा बिम्बात्मक र प्रतीकात्मक अर्थ दिने शब्द राख्नु उपयुक्त हुने बताए । गीतमा के भन्यो भन्दा पनि कसरी भन्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने भएकाले शृंगारमा राम्रा गीत पनि बन्न सक्ने दाबी गरे । अनेकौं चर्चित र राम्रो गीत लेखेका बराल प्रेमगीतमा उदांगोपन जायज नहुने तर्क गर्छन् । कलाकारले समाजको शिष्टतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै बरालले चर्चाकै लागि प्रयोग गरिने शब्दले समाज गलत दिशामा जान सक्ने शंका व्यक्त गरे । राम्रा गीत लेखेर र गाएर लामो समयसम्म बाँच्न सकिने हुँदा गीतमा सिर्जनात्मकता हुनै पर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्ता छन् प्रतिक्रियाहरू-‘घाँटीभन्दा तल त राम्री रे । अब अर्को पटक नाइटोभन्दा तल अझै राम्रो रैछ भनेर निकाल्नु । यस्ता गीतमा नाच्नी रीमा विक र गीत सेयर गर्ने केकी अधिकारी ? कृष्ण पोखरेल-यस्ता छाडा गीतका सर्जकलाई कारबाही गर्ने संगीतको कुनै निकाय नहुनु संगीत क्षेत्रकै दुर्भाग्य हो । नवीन राई -यस्ता गीत लेख्नेको महिलाप्रतिको मानसिकतालाई के भन्ने ? महिलाको स्तरलाई तल सोच्ने बौलाहापन हो । –बास्ना
महिलाको खिल्ली उडाउने गीतमा पनि नाच्नु रीमा विश्वकर्माले स्वीकार गर्नु या बौद्धिक भनिएकी केकी अधिकारीले गीत सेयर गर्नु अति सामान्य कुरा हो । मूल कुरा चाहिँ अपवादबाहेक नेपालका सेलिब्रेटीको विचार पक्ष साह्रै कमजोर छ । कहिले कसो उनीहरूले समाजसँग जोडिएका विषयमा ठीक विचार राख्नु संयोग मात्रै हो । खासमा उनीहरू पँुजीवादी दुनियाँका रोलमोडल बाहेक केही होइनन् । विशाल रेग्मी
नाटकै हो’ गित बजारमा
नेफ्टा अवार्ड- टाइटल स्पोन्सरमा
गायिका संगीता पौडेल पाण्डेको